Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » Imbali yehotele: Ihotele yaseLibby kunye neBaths, eNew York, NY
inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ihotele kunye neebhafu zeLibby
Ngasekupheleni kweminyaka yee-1920, imarike yemasheya yayinyuka, amashishini ayonwabela iirekhodi kwaye abaphuhlisi babesakha izakhiwo ezitsha ngokukhawuleza.
Iinkampani ekubanjiswa ngazo ziye zaqala ukubonelela ngokhuseleko olubambekayo, uhlobo olutsha lotyalo mali.
Esinye sezakhiwo ezitsha yayiyi-12 yaseLibby's Ihotele kunye neBaths, eyakhiwe ngo-1926 kwikona yeChrystie kunye neDelancey Streets kwicala elingasempuma laseNew York.
Yayiyindawo yokuqala yehotele yamaJuda enephuli enamachibi amahle, indawo yokuzivocavoca yanamhlanje, iibhafu zaseRussia-zaseTurkey kunye neelounge ezivulelekileyo kuluntu luphela.
Umphuhlisi yayinguMax Bernstein, umfuduki ovela eSlutzk, eRashiya, owafika eNew York nosapho lwakhe ngo-1900 xa uMax wayeneminyaka eli-11 ubudala. Izitalato apho uMax akhulele khona kwicala elingasempuma zazizele ngabathengisi beenqwelwana ezirhuqwayo, ezinye zineenqwelo ezirhuqwa ngamahashe, abantwana bedlala imidlalo yasesitratweni kunye nabahlali berenti behleli ezihlalweni. Ngelishwa, xa umama wakhe uLibby wasweleka kungaphelanga nonyaka, uMax wabaleka ekhaya walala ubusuku epakini encinci ekufutshane. Kwiminyaka edlulileyo, uMax wathi iphupha lakhe lokwakha ihotele yaseLibby kwikona yeChrystie kunye neDelancey Streets yeza kuye ngobo busuku.
Emva kweminyaka yokuba noluhlu lweendawo zokutyela, nganye kuzo ibizwa ngokuba yiLibby's, uMax wakwazi ukufumana umhlaba kwikona yakhe ayithandayo apho wakha khona ihotele eyavulwa nge-5 ka-Epreli 1926. UMax wayeyintatheli eyazalwa ngokwendalo kuba watyala imali inani elingaqhelekanga lamandla kunye nemali kwiphulo lokwazisa elibanzi kumaphephandaba amaninzi emihla ngemihla ngolwimi lwaseYiddish. Ngosuku lokuvula, i ENew York Times wajoyina amanye amaphepha ekunikezeleni ingxelo ngovulo olukhulu. Ihotele yaseLibby ibonise indawo yokubambela enemigangatho emibini enophahla lwesamente olutyebileyo oluxhaswe ziintsika zemabhile emhlophe. Ihotele yayinamagumbi okuhlangana, amagumbi okufundela kunye neendawo zokutyela ezimbini zekosher. UMax ubambe imicimbi yesisa kunye neeklasi zokudada zabantwana basekuhlaleni.
Ihotele yaseLibby isasaza isikhululo sikanomathotholo sokuqala saseYiddish, iWFBH (ukusuka phezulu ngasentshona yeHotel Majestic) enabadlali abonwabisayo abadumileyo, imidlalo yeqonga kunye nezibane ezifana neSol Hurok, iRube Goldberg kunye neGeorge Jessel. UBernstein akazange ashiye ndleko, waqesha njengomlawuli wakhe kwezomculo uJosef Cherniavsky, inkokeli yeYiddish-American Jazz Band neyaziwa ngokubanzi njenge-Jewish Paul Whiteman. Kwiminyaka emibini yokuqala, ihotele yabonakala iyimpumelelo enkulu kodwa kwathi kuphela u-1928, uphahla lwawela ngaphakathi.
Utywala lwe iihotele ezintsha zivuliwe eNew York. Uninzi, ukuze luhlale lunyibilikisi, lwaqala ukulungiselela amaJuda, luthimba abathengi bakaMax. UMax wayenokuba nakho kangcono ukukhuphisana ukuba imeko yakhe yeemvakalelo yayingekabikho kuhla; ngo-Okthobha 20, 1926, umfazi wakhe uSara wasweleka. Kwityala lenkundla kamva, uMax wayeza kungqina ukuba usizi awalufumanayo lamshiya engakwazi ukusebenza.
Ngapha koko, otyalwayo wakhe ophambili yayiyi-American Bond kunye neNkampani yokuBambisa ngempahla (i-AMBAM), umntu obolekayo ongaphikiswayo. Ngaphambi nje kwengozi yemarike yonyaka we-1929, i-AMBAM yaxela ihotele kwaye, ngendlela engaqhelekanga, uSodolophu uJimmy Walker wamisela uJoseph Force Crater, igqwetha elixhumene neTammany njengommkeli. NgokukaJaji Crater, i-AMBAM inokuba inolwazi lwangaphakathi ngesicwangciso sesixeko sokwandisa iSitalato iChrystie. Ngawuphi na umcimbi, i-AMBAM ngoku ibanga ukuba ihotele yayixabisa i-3.2 yezigidi zeedola (emva kokuxabisa ihotele yaseLibby kwi-1.3 yezigidi zeedola ngokuchazwa). Ngommandla obalaseleyo, iSixeko saseNew York sathatha ubunini saza sahlawula i-AMBAM yezigidi ezi-2.85 zeedola. Isixeko saye sadiliza izakhiwo kwibhloko kubandakanya iMax Bernstein's Ihotele yaseLibby kunye neBaths.
Kodwa kuninzi ebalini. Ngo-1931, i-AMBAM yagwetywa ngesikimu esifanayo malunga ne-Mayflower Hotel eWashington, DC. Wanyamalala emva kweenyanga ezine kwaye akafumaneki ukusukela ngoko. Isitalato iChrystie sandiswa, uXinzelelo olukhulu lwasekwa kwaye ekugqibeleni, isiza sajikwa saba yiSara Delano Roosevelt Park nguRobert Moses.
Xa uMax Bernstein wasweleka ngoDisemba 13, 1946, i ENew York Times Umngcwabo wabhala: "UMax Bernstein, 57, owayekhe wangumnini wehotele… wakha i-3,000,000 yeedola ematyotyombeni, ukuze abone iSikhumbuzo kuMama oRazed."
Esi iya kuba sisiphelo seli bali linomdla ngaphandle kokuba UPakn Treger * Inqaku lichaze le ndlela ilandelayo:
Ibali likaLibby laya lifiphala de kwaba lihlobo lowe-2001, xa icandelo lendlela yabahambi ngeenyawo kufutshane nekona yeChrystie kunye neDelancey Streets zangena ngaphakathi, zenza isinkhole. Umngxunya ukhule ukhulu ngokwaneleyo ukuba ungaginya umthi wonke kwaye waqala ukungena kwizitalato zedolophu nakwiziko eliphakamileyo elikufutshane eSara Delano Roosevelt Park. Ngezo ntsuku zimsulwa phambi kukaSeptemba 11, i-sinkhole yayibonakala iyisoyikiso esikhulu ejongene neManhattan esezantsi.
Iinjineli zeSixeko bezingazi unobangela, ke ngoko bayihlisela kwikhamera. Ukumangaliswa kwabo, iinyawo ezingama-22 ngaphantsi komphezulu bafumana igumbi elipheleleyo, elizele ziibhokisi zeencwadi. Bathe bakukhangela kwiirekhodi zikaMasipala, bafumanisa ukuba iLibby's Hotel yake yema apho kwaye bafumene igumbi kwigumbi elingaphantsi kwayo. Kwi ENew York Times elaliqala ngoSeptemba 11, 2001, uMkomishinala weePaki zeSixeko saseNew York uHenry J. Stern wacatshulwa esithi, “Indikhumbuza iPompeii.”
Ngokuchasene nePompeii, akukho nzame zenziwayo zokufikelela kwigumbi okanye ukugrumba. Iinjineli zedolophu zikhethe ukuyizalisa nge grout, zingcwaba igumbi kunye nemixholo yayo engaqondakaliyo. Kutyalwe umthi omtsha, kwalungiswa ipaki.
* "URitz ngeShvitz" nguShulamith Berger noJai Zion, IPakn Treger, NgeNtwasahlobo 2009